Articles tagged 'mary chiwenga'
Miss Zim chaos continues 21 June 2015 HARARE - Detractors of Mary Chiwenga, who took over from Kiki Divaris as chairperson of the Miss Zimbabwe Trust three years ago, have every reason to liken the former model to a bull in a china shop. Several Miss Zimbabwe queens and beauty industry stakeholders have found Chiwenga's cash-rich ...
Miss Zim Trust should be professional 21 June 2015 HARARE - Miss Zimbabwe Trust, holders of the Miss Zimbabwe should be professional enough in handling affairs of the national beauty pageant. The Trust recently held a “press conference” at which they exclusively invited one journalist from the state media to cover their announcement to expel r...
It never rains but pours for Chiwenga 10 August 2014 HARARE - The resignation of reigning Miss Zimbabwe, Thabiso Phiri, a 22-year-old University of Zimbabwe law student has become the latest blow to Miss Zimbabwe Trust chairperson, Mary Chiwenga's ambitions to smoothly run the pageant. For Mary, the wife of General Constantine Chiwenga it never ...
Miss Zim struggles to get contestants 24 July 2013 HARARE - Unimpressed Miss Zimbabwe pageant organisers have been forced to shelve a scheduled boot camp after discovering that only seven out of 16 girls selected through provincial competitions meet expected standards. Sibusisiwe Mazibuko, the Miss Zimbabwe Trust secretary, admitted to the D..
Miss Zim finals postponed 4 July 2013 HARARE Organisers of the Miss Zimbabwe pageant have moved the date of the finals to August 16 from July 26 and have opened the door for more girls to pitch up for castings. Mary Chiwenga, chairperson of the Miss Zimbabwe Trust, sought permission from Miss World organisers for an extension which w...